Amasu Aqhutshwa Ngedatha Akha Izikhangiso Zomphakathi Zezinga le-Jedi | Martech Zone
Amasu Aqhutshwa Ngedatha Akha Izikhangiso Zomphakathi Zezinga leJedi
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 17, i-2020 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 17, i-2020 UMichael Ray
I-Star Wars ichaza Force njengento egeleza kuzo zonke izinto. UDarth Vader usitshela ukuthi singayithathi kancane futhi u-Obi-Wan utshela uLuka ukuthi ihlanganisa zonke izinto ndawonye.
Uma ubheka ezokuxhum ezikhangisa indawo yonke, kunjalo idatha okuhlanganisa zonke izinto ndawonye, ​​kuthonya ukudala, izethameli, ukuthumela imiyalezo, isikhathi nokuningi. Nazi izifundo ezimbalwa ukukusiza ufunde ukuthi ungawasebenzisa kanjani lawo mandla ukwakha imikhankaso enamandla kakhulu, enamandla.
Isifundo 1: Gxila Kwezinhloso Ezicacile
Ukugxila kwakho kunquma iqiniso lakho.
Ukugxila kuyinto ebaluleke kakhulu ebunyeni kunoma yimuphi umkhankaso ophumelele futhi ukungagxilwe kuyimbangela enkulu yokwehluleka. Izinjongo ezicacile nezilinganisekayo zibalulekile futhi zona kuthanda nquma iqiniso lakho.
Lapho usukhethe inhloso yomkhankaso, sebenzisa amaphuzu wedatha kuwebhusayithi yakho nakwiziteshi zenhlalo ukubona ukuthi ingafinyeleleka yini.
Gxila enjongweni yakho: Thola amakheli we-imeyili angaba ngu-1,000 XNUMX.
Buyekeza idatha yewebhusayithiNgokuya ngemininingwane edlule, siyabona ukuthi kudinga abantu abangama-25 abavakashela leli fomu ukuthola ikheli elilodwa le-imeyili.
Nquma izinhloso zethrafikhi yewebhu: Uma abantu abangama-25 = 1 ikheli le-imeyili, kuzothatha ukushaya okungama-25,000 kulelo khasi lewebhu ukuthola amakheli e-imeyili ayi-1,000 XNUMX.
Qalisa izimo zomphakathi: Amapulatifomu amaningi ezikhangiso zenhlalo anethuluzi lokuphrojusa elibonisa okuvelayo okulinganiselwa, ukuchofoza noma ukuguqulwa. Faka isabelomali sakho kulawa mathuluzi ukubona ukuthi ukufinyelela ama-website angama-25,000 kuyafinyeleleka.
Hlola futhi ulinganise: Uma izikwele zakho zamagoli ngesabelomali sakho, kuhle! Uma sekuphelile, setha izinhloso ezingokoqobo noma wandise isabelomali sakho somkhankaso.
Isifundo 2: Khetha Indlela Yakho Ngokucophelela
Ukwesaba ukulahleka kuyindlela eya ohlangothini olumnyama.
Baningi kakhulu abathengisi abathatha izinqumo ngokuya ngombono wokuthi uma bengasakazi izikhangiso zabo kuzethameli ezibanzi ngangokunokwenzeka, bazokwehlulwa emncintiswaneni. Eqinisweni, ukuthola ifayela le- kwesokudla Izithameli zifana nokuthola inaliti ku-haystack ye-galactic futhi idatha izokusiza ukuthi ufinyelele kubo kahle nangokubiza imali.
Manje uzoba nomqondo ngezithameli ofuna ukuzikhangisa kuzo, kepha udinga ukunquma isikhathi nendawo efanelekile ukuze ufinyelele kuzo. Nakhu ukuthi ungayivumela kanjani idatha ukuthi inqume:
Dlala amandla wenethiwekhi: Inethiwekhi ngayinye yokuxhumana inamandla athile akuvumela ukuthi ufinyelele izethameli ngezindlela ezihlukile. I-LinkedIn, isibonelo, yinhle ekuqondisweni kwesihloko somsebenzi, ngakho-ke uma izithameli zakho eziyinhloko onjiniyela, ungakha kalula izithameli ze-LinkedIn ukuze ufinyelele kuzo. Kodwa-ke, uma umkhankaso wakho ugxile kubuchwepheshe obuthile bobunjiniyela (yisho ukuhamba ngejubane elincane), ungahle uthande ukwengeza ngezikhangiso ze-Twitter ezikuvumela ukuthi ukhombe ngokususelwa ezingxoxweni abantu abanazo ngalobo buchwepheshe ngoba vele sebebandakanyekile kulesi sihloko .
Ekukhangiseni komphakathi, usayizi enza ndaba: Ku Umbuso Uyateleka Emuva, uYoda utshela uLuka ngokudumile ukuthi "usayizi awunendaba”Kodwa ekukhangiseni, usayizi uyikho konke. Ngokuvamile, amachibi ezethameli amakhulu avumela inethiwekhi yezikhangiso zokuxhumana nabantu ukuba ithole i-algorithm yayo yedatha ngokuyimpumelelo ukusiza ukukhomba abantu abangase baphendule isikhangiso sakho. Izithameli ezincane zinikela ngemininingwane emincane kulawo ma-algorithms, kepha abiza kakhulu futhi angakusiza wenze izinto ezifana nenkampani ngayinye noma ukukhomba kwemboni. Yonke imikhankaso yehlukile, ngakho-ke inetha olikhiphayo lizohluka noma lincane kangakanani lizohluka.
Yenza izethameli zincintisane: Unezinketho eziningi zokuqondiswa komphakathi ezibandakanya uhlu lwamakhasimende akhona, izethameli zokuzibandakanya kanye nenani labantu / izintshisekelo. Manje kunokuba uthembele emkhunjini owodwa ukusebenzisa ukuvinjelwa kokumaketha, sebenzisa izithambisi ezincane, izethameli eziqondiswe komunye nomunye futhi unganquma ukuthi yini ephumelela kakhulu bese uhambisa inkomba kamuva ngokuya ngokusebenza.
Isifundo 3: Thembela Kwedatha, Hhayi Ngenhlanhla
Kokuhlangenwe nakho kwami, ayikho into efana nenhlanhla.
U-Obi Wan Kenobi
Kuvela iJedi Lucky ngenxa yokuqeqeshwa kwabo okunamandla nokuzibophezela kwabo ekufundeni ukuthi bangaqonda kanjani ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele bazithathe nokuthi bazimisele kangakanani ku- Force uqondisa indlela yabo. Kumakethi wezokuxhumana, idatha idlala indima efanayo kuzo zonke izinyathelo zohambo lwethu lokukhangisa lwe-galactic, okusenza sikwazi ukwenza izinqumo ezifundisiwe ngokususelwa kunenhlanhla.
Manje ingxenye enkulu yokukhankasa inquma ukuthi iziphi izinto zokudala ezibukwayo nezithumela imiyalezo ezizosetshenziselwa ukuyikhuthaza. Imvamisa, lokhu kuholela ekungavumelaneni kwabasebenzi, kepha imininingwane iyazixazulula. Nakhu ukuthi:
Sungula umugqa wokuqala: Yonke into yokudala kufanele ihambisane namazinga webhrend, ihambisane nokuqukethwe okuphakanyiswayo futhi ihambisane nezethameli ezihlosiwe. Linganisa okusebenze esikhathini esedlule ukuthola ukuthi yini ezosebenza ngokuzayo.
Hlola konke: Kaningi, imikhiqizo izama ukukhipha umkhankaso wabo phansi kwesithombe nomlayezo owodwa. Ingozi ukuthi uma isebenza, awazi ukuthi kungani futhi uma yehluleka, awazi ukuthi yini okufanele usolwe. Esikhundleni salokho, hlola ubuncane bezithombe / amavidiyo ayisisekelo, izinhlobo ezine zekhophi yesikhangiso, izihloko ezintathu nezingcingo ezimbili zokwenza (ama-CTA). Yebo, lokhu kuthatha isikhathi eside ukusetha, kepha kunikezela ngemininingwane ebalulekile lapho kusebenza izinto nokuthi kungani.
Lungiselela yonke into: Sezadlula izinsuku zokusetha-futhi-ukhohlwe-imikhankaso yezikhangiso zomphakathi. Uma uqalisa, kufanele uhlaziye amamethrikhi wokusebenza njalo ngosuku olulodwa ngeviki lokuqala futhi okungenani kabili ngeviki ngemuva kwalokho.
Susa izithombe ezingenzi kahle, imiyalezo noma izihloko zezindaba.
Amabhajethi we-Shift ezithombeni, emiyalezweni noma ezihlokweni ezisebenza ngokweqile.
Uma umkhankaso ungasebenzi nje, wuvale, uhlole idatha bese uzama ukuwulungisa kunokuvumela amabhajethi ophe.
Uma ushayela ngokuchofoza okuningi kepha akekho oguqukayo kuwebhusayithi yakho, hlola ikhasi lokufika — ingabe amandla nomyalezo wesikhangiso uyavela? Ingabe ifomu lakho lide kakhulu? Yenza izinguquko. Isilingo. Phinda uvule umkhankaso wakho bese ubona ukuthi uyayixazulula yini inkinga.
Izethameli ezimfushane: Emikhankasweni eminingi, izethameli zakho ezihlosiwe zingcwatshwe eqenjini lezethameli elibanzi (inaliti yakho ku-haystack ye-galactic) futhi kungumsebenzi wakho ukudweba abantu. Enye indlela enhle yokwenza lokho ukucwenga izethameli zakho ngokususelwe ekusebenzeni.
Uma amazwe athile noma izifundazwe zingaphenduli, zisuse echibini lezithameli zakho.
Uma inani elithile labantu liphendula ngamanani aphindwe kabili kunawo wonke umuntu, shintsha izabelomali ukuze ubasekele.
Sebenzisa izethameli zokuzibandakanya futhi wakhe ama-lookalikes. Isibonelo, uma usebenzisa umkhankaso we-Facebook usebenzisa ukuphinda uhlele iwebhusayithi, dala izethameli zokuzibandakanya ezimele abantu abasebenza kakhulu. Bese usebenzisa lezi zilaleli ukwakha izithameli ezibukeka futhi uthuthukise imiphumela yakho nakakhulu.
Endaweni emnyama sithola thina, futhi ulwazi oluncane ngokwengeziwe lukhanyisa indlela yethu.
Ulwazi lubalulekile futhi nakwabezokuxhumana iJedi, idatha ingumthombo owodwa weqiniso wolwazi. Khumbula ukuthi idatha oyisebenzisayo lapho usetha imikhankaso yakho yemidiya yokuxhumana nabantu, imiphumela yakho iyoba ngcono futhi ibikezelwe.
Futhi kwangathi amandla angaba nawe, ngaso sonke isikhathi.
Tags: U-Obi Wan KenobinokwandisaI-star wars
UMichael unguMqondisi Wezokuxhumana Komphakathi e STIR Ukukhangisa & Ukumaketha Okuhlanganisiwe. Imithombo yezokuxhumana ingaphezu komsebenzi kuye, intshisekelo evumele uMichael ukuthi ahlanganise ubuhlakani bakhe, ingqondo yakhe yokuhlaziya, nothando lwakhe lwenkonzo yamakhasimende lube ngumsebenzi ohlale uyinselele futhi ongalokothi ube nesithukuthezi.
Amaqhinga Wokwakhiwa Kwesixhumanisi Esingaphansi Esisebenza Ngokumangazayo Kahle
Amakhukhi Asekho Isizotha semali: Indlela Ubunikazi Nokwenza Okwakho Okushintsha Ngayo Emhlabeni We-Post-Cookie